रहस्यमय घटना | Knowledge & Fun Park
November 24, 2017 Admin Latest, Nepali Literature, कथा 0
कपाल straight थियो । अनुहार गहुगोरो । नाकमा फूली , आँखा डोला राम्रा थिए । उनलाई ध्यान दिन्न भन्दा भन्दै पनि आँखा उनी तिरै जान्थ्यो । मेरो पछाडी थुप्रै मान्छेहरु थिए । अनि मेरो अगाडि एउटा युबक अनि उस्को अगाडि उनी र उनको अगाडि केही मान्छेहरु । हामी ticket काट्ने line मा बसेका थियौ , मनकामना केबुल कारको ।
सायद त्यो युबक उनको दाइ हुनुपर्छ अनुहार अलिक अलिक उस्तै थियो । एउटा मनले सोच्दै थियो, यति चाडै त बिबाह हुन नपर्ने । अनि अर्को मनले भन्दै थियो दाइ नै भइदिए हुन्थ्यो । किनकी मेरो मनमा बसिसकेकी थिइन । सायद CRUSH यसैलाई भन्दो हो ।
सोच्दै थिए त्यो line बस्दाको bore परिचय गरेर हटाउने छु तर बोल्ने आट नै आएको थिएन !! बोल्छु बोल्छु भनेर मनले कति चोटि गति बढायो , सायद अरुले ख्याल गरेको भए बाहिरै सुन्थ्ये होला , तर ममा बोल्न आट आएन । टिकट काउन्टरमा उन्को पालो आयो अनि उन्को दाइको । उनिहरु गैसकेपछी मेरो पालो आयो अनि मैले भाइको लागि child , बाबा आमाको लागि general र मेरो लागि student को टिकट काटेर अर्को ठाउमा line बस्न गर !!
लेखक :- Xt Bisu
बाबा अन्तै जानू भएको हुनाले अलिक ढिला भयौ, मेरो CRUSH वाली त कति अगाडि पुगिसकेछे । अलिक समय अगाडि त कससेकम दुरि नजिक थियो तर अहिले दुरि बढ्यो । अघि बोल्न पर्नु पर्ने रहेछ अब सायद यहि होला अन्तिम पटक देखिने जस्तो लाग्न थाल्यो । कति ध्यान आकर्षक गरेको होला !! हुन त राम्रा मान्छे हाम्रा लागि बनेको हुदैन भन्ने लाग्यो । ह्या ध्यान दिन्न अब भन्ने मनमा लाग्यो तर अगाडि हेर्यो कि त्यही अनुहार हेर्न मन लाग्ने ।
कस्तो एकै दिन आउन परेको हामी ? भगवानले भेट केही कारणको लागि गराउछ भन्नि सुनेको थिए त्यसैले सोछे सायद पछि पो हामी सम्बन्धमा बाधिने हौ कि ? भोलि कस्ले देखेको छ र? केही समयपछी टिकट देखाएर उनी आफ्नो परिवारसंग केबलकार चढिन् । चक्रहरुले तार घुमाएको हेरे मैले , लौ मेरीलाई लगिदियो यस्ले, अब हामीलाई कतिबेला लग्ने हो । केही समय पछि हामी पनि चढ्यौ । हिड्दा हिड्दै चढेका थियो अनि एकैछिन ढोका आफै बन्द भयो अनि लाग्यौ मन्दिर तर्फ । दोस्रो पटक थियो मेरो केबुलकारको यात्रा तर पहिलो यात्राको कुनै महसूस छैन मलाई किनकी सानो थिए , यादको नाममा फोटो मात्रै ।।
केहि समयपछी माथी केबुलकारबाट ओर्लियौ । अनि बिस्तारै मन्दिर तर्फ लाग्यौ । मलाई हतार थियो उनलाई हेर्न । तर परिवारको फोटो खिच्नका निम्ति हामी भुल्यौ । केही समयपछी माथी पुग्दा देखे , दाइ र उनी एताउता घुमिराखेका थिए । त्यहा पनि लाइन थियो । हामी लाइन बस्यौ । सोचेको थिए तिनीहरु पनि लाइनमा बस्छन होला तर अह बसेनन् । पछि यो थाहा पाए बुबा आमा लाइनमा बस्नु भएको रहेछ अनि उनीहरु बिचमा छिरे र पुजा गरे । हामी अझै लाइनमा नै थियौ, उनीहरु सपरिवार हातमा डोरा बाध्न लाएका थिए । मैले त्यही लाइन बाटै नियालिरहेको थिए । घरी घरी त सोचिराखेको थिए के उनीले पनि मैले जत्तिकै मलाई ख्याल गरेकी होली? आँखा त जुधेका नै थिए त्यही भएर पनि सोच्न बाध्य भए कि ममा कत्तिको ख्याल गएको छ होला भन्ने !!
पुजा गरेर निस्कियौ हामी सपरिवार । वर माग्ने बेलामा आफ्नो लागि मागे, सपरिवारको लागि, एउटा साथीले मेरो लागि पनि माग्दे है भनेको थियो उस्को लागि पनि माग्दिए र जादा जाँदै मागे,” हे प्रभु मलाई मलाई त्यो केटीको facebook id जसै मिलाई देऊ है !!” भिड निकै थियो । जति सम्झिए उति मागे । मनले कति कुराहरु सोचिराख्या थियो । facebook मा people you may know मा आइदिए नि हुन्थ्यो नि भन्नी लागेको थियो । कुनै ग्रुपहरुमा मनकामना गएको केटी भन्दै पोस्ट बनाएर राख्दिम कि भन्ने भएको थियो । सब सोचाईमा सिमित भए ।
हामी निस्कियौ मन्दिरबाट अनि जुत्ता लगाउन थाल्यौ, त्यसपछी पण्डितहरुसंग डोरा बाध्न लायौ । उनी फोटो खिच्दै थिइन् । दाइले DSLR बाट खिच्दिदै थियो । अनि हामी पनि फोटो खिच्न तिर लाग्यौ । घरकै सबै सदस्यहरुको भन्दा राम्रो mobile मेरो । त्यो पनि फोटो खिच्दा mobile जति silent मा राखेपनी camera sound off नहुने । उनको फोटो कैद गर्न मन थियो, तर मोबाइलले साथ दिएन । घर छिट्टो पुग्नु थियो अनि हतार हतार गर्न थाल्यौं । उनलाई छोडेर जाने भयौ । घर जाने बेलैमा भएपनी एकचोटी त बोल्छु भन्ने सोच आएको थियो अनि नाम सोधेर बरु facebook मा search गर्छु भन्ने भएको थियो । तर अह केही गरि सकिन । र हामी फर्कियौ ।
मन्दिरबाट घर पुगिन्जेल पनि बेलाबेला अनुहारको प्रतिबिम्ब आइरहेको थियो । घरमा पुगेर पनि मनकामना search गरे, कतै tag मा भिटिन्छे कि भन्ने भयो । तर मेरो कोसिस असफल । अनि दसै तिहार सक्किएसंगै मेरो बिदा सकियो र अध्ययनको लागि घरबाट निस्किए । कोठामा पुगे । त्यस्को दुइचार दिन पछि म आफै तीन छक खाए । जून केटी मनकामनामा देखेको ……….
(feedbacks are always welcomed )